I-china Astragalus abakhiqizi nabaphakeli | I-HEX
I-ASTRAGALUS, yezitshalo nomuthi wamakhambi waseChina ngokuhlanganyela. I-Radix astragali ikhiqizwa e-Inner Mongolia, eShanxi, eGansu, eHeilongjiang nakwezinye izindawo. Inemisebenzi yokuthambisa i-Qi nokulungisa indawo, ukukhuthaza i-diuresis ne-detumescence, ukusekela ubuthi nokukhipha ubomvu, nokwakha imisipha. Ukusetshenziswa kwezokwelapha kwe-astragalus kunomlando weminyaka engaphezu kwengu-2000, ucwaningo lwesimanje, i-Astragalus Saponin, i-sucrose, i-polysaccharides, ama-amino acid ahlukahlukene, i-folic acid kanye ne-selenium, i-zinc, ithusi nokunye okune-micronutrient. Inemisebenzi yokuqinisa amasosha omzimba, ukuvikela isibindi, i-diuresis, ukulwa nokuguga, ukulwa nengcindezi, ukunciphisa umfutho wegazi nokusebenza okubanzi kwamagciwane.
Itiye le-Hawthorn elomile